အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes တို့ Video Conferencing ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး – Ministry of Foreign Affairs
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes တို့ Video Conferencing ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
(၂-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing ဖြင့် လက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး တာဝန်များ မကြာမီပြီးဆုံး၍ ပြောင်း‌‌ရွှေ့ခြင်းမပြုမီ farewell call အဖြစ် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နော်ဝေနိုင်ငံမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွေဆေးရုံအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများ၊ အသိုက်အဝန်းများအကြား သဟဇာတမြှင့်တင်ရေး၊ ပညာသင်ဆု ပေးအပ်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများ၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် စခန်းများပိတ်သိမ်းရေး မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်း ဆွေးနွေး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ယင်း‌နောက် မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြေမြှုပ်မိုင်း ပညာပေးရေး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးရေးကိစ္စများ၊ ဒီရေတောများ ထိန်းသိမ်းရေးအပါအဝင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး အလားအလာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့် အပြုသဘော ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရေးအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်သွားရေးကိစ္စများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် နီးကပ်စွာဖြင့် အပြုသဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။